को बन्ला नेपालगन्जको मेयर ? मिश्र र राइको उम्मेदवारी कन्फर्म, अरु दलमा ढुलमुल – Online Khojkhabar
१०:३२ बिहान, चैत्र २३, २०७८
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै गएपछि पश्चिम नेपालको प्रमुख सहर नेपालगन्जमा पनि उम्मेदवारको चर्चा परिचर्चाले बजार तताएको छ ।
यहाँका चोक र चिया पसलमा समेत उम्मेदवारको चर्चा हुने गरेको छ । कुन दलको कुन उम्मेदवारले उम्मेदवारी पाए कति मतले जित्ने आँकलन समेत सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । उम्मेदवारी मनोनयनका लागि झण्डैै एक महिना बाँकी रहेका बेला कुन दलले कसलाई उम्मेदवार बनाउँछ भन्ने सर्वसाधारण मतदाताले चासोका साथ हेरेका छन् ।
बाँकेका आठ वटै पालिकामा मुख्य दलले चुनावी गतिविधिलाई तीब्र पारेका छन् । आठ पालिका मध्ये नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरमा कुन दलबाट को उम्मेदवार बन्लान् भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । पश्चिम नेपालको मुख्य व्यापारिक केन्द्र नेपालगन्जको आगामी कार्यकालका लागि मेयर बन्न मुख्य दलका दर्जन बढी नेता दौड्धुपमा छन् ।
आ–आफ्नो दलको आधिकारिक उम्मेदवार बन्ने दाउमा नेताहरु लागेका छन् । पाँच दलिय सत्ता गठबन्धन दलले आवश्यकताको माधारमा तल्लो तहमा तालमेल गर्ने सहमति गरे पनि नेपालगन्जमा सवै दलले आ–आफ्नो दावी छोड्ने संकेत देखिएको छैन ।
देशको सवैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले दुई महिना अघि नै केन्द्रिय सदस्य पशुपति दयाल मिश्रलाई मेयरको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । उनलाई नै एमालेले मेयरको उम्मेदवार बनाउने निश्चित भए पनि एमाले नेपालगन्ज उपमहानगर अध्यक्ष दत्तप्रसाद आचार्यले पनि मेयरको दावी गर्दै आएका छन् । उनले एमालेको तर्फबाट आफू सवैभन्दा बलियो उम्मेदवार भएको दावी समेत गर्दै आएका छन् । तर, उनले टिकट पाउने सम्भावना एकदमै कम छ । ‘एमालेको तर्फबाट नेपालगन्जको मेयरको उम्मेदवार मिश्र बाहेक अरुको चान्स एकदमै न्यून छ,’ एमाले उच्च स्रोतले भन्यो ।
अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह लिएर प्रतिष्पर्धा गरेका मिश्र केही समय अघि दलबलसहित एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । प्रवेश गर्ने बेला नै एमालेले उनलाई नेपालगन्जको मेयरको उम्मेदवार बनाउन सुनिश्चित भएको एमालेका एक केन्द्रिय सदस्यले जानकारी दिए ।
नेपाली काँग्रेसका आधा दर्जन नेताले मेयरमा आकांक्षा देखाएका छन् । तर, तीन जना बीच मुख्य प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरमा पराजित डा। सुरेशकुमार कनोडिया, हालकी उपमेयर उमा थापा मगर र नगर सभापति प्रशान्त विष्ट बलियो दावेदारको रुपमा देखिएका छन् ।
तै पनि व्यापारिक पृष्ठभूमीका अच्युतप्रसाद प्रसाईं र ललितकुमार रौनियार पनि बलियो दाबेदारको रुपमा अगाडी आएका छन् । काँग्रेस स्रोतका अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर हमाल, महासमिति सदस्य निरन्जनसिंह सिजापति र राजकुमार बर्माले पनि मेयरमा लड्ने इच्चा जनाएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नन्दलाल बैश्य र आदेशकुमार अग्रवालको चर्चा छ । यी दुवै व्यापारिक पृष्ठभूमीका माओवादी नेता हुन् । उनीहरुसँंगै नवीन शर्माको चर्चा पनि उत्तिकै छ ।
जनता समाजवादी पार्टीले पार्टीका बाँके अध्यक्ष मोहम्मद कमरुद्दिन राईलाई मेयरको उम्मेदवार बनाउने निश्चित भएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा उनी नेपालगन्जको मेयरमा प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । उनी उक्त निर्वाचनमा चौथो स्थानमा थिए । उनले आफू मेयरको एकल उम्मेदवार भएको दावी गरेका छन् ।
यसैगरि, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नेपालगन्जका पूर्व उपमेयर समसुद्धिन सिद्धिकीलाई उमेदवार बनाउने निश्चित छ । उनी अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट मेयरमा लडेका थिए । राप्रपाबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष मोहम्मद सफिक बेहना र अभयकुमार बस्नेतले मेयरमा दाबी गरेका छन् ।
यी बाहेक लोकतान्त्रिक समाजबादी पार्टी, राप्रपा नेपाल लगायत साना र स्वतन्त्र ढंगले मेयरमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या पनि बढ्दो छ । नेपालगन्जका मेयर राप्रपाका महामन्त्री डा धवल शमशेर राणाले मेयरमा नलड्ने निर्णय गरेपछि राप्रपाले एमालेलाई मेयरमा सघाउने र संसदीय निर्वाचनमा एमालेले राप्रपालाई सहयोग गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।
यस विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राप्रपा महामन्त्री राणासँग एकचरणको छलफल गरिसकेका छन् । नेपालगन्जको एक होटलमा ओली र राणा वीच करिव डेढ घण्टा छलफल भएको थियो ।
१:४७ मध्यान्ह, असार १२, २०७७
बढदो जाडोमा आफू लाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ ? जानौ ८ तरीकाहरू
७:२१ बिहान, मंसिर २६, २०७६